एक डेटा स्क्रैपिंग उपकरण मा सेमील्ट विशेषज्ञ विस्तृत
यो जान्न जरूरी छ कि कति क्लिकहरू फरक फरक वेब स्क्यान गर्न वा निकाल्दछ पृष्ठहरू. SimpleIndex सँग, तपाईं केवल डेटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईंको वेब पृष्ठहरू स्क्यान गर्न र तिनीहरूलाई क्रल गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंको साइटको समग्र प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्दछ।. SimpleIndex एक अपेक्षाकृत नयाँ अझै सम्म अद्भुत र लचीला डाटा स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो. सर्वोत्तम मूल्य एकीकरण समय, संतुलन मूल्य, र समर्थन लागत बाट आउँछ. SimpleIndex को विशेषताहरू एक-क्लिक प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस र छुट मूल्य निर्धारण सँग संयुक्त छन्.
यसको मुख्य लाभहरू तल वर्णन गरिएको छ.
1. डेटाको ठूलो मात्रा
SimpleIndex को प्रावधान उन (1 9) डाटा स्क्रैपिंग उपकरण मध्ये एक हो जसले तपाईको डाटा को लागी धेरै मात्रा मा डेटा प्रदान गर्दछ र यसको आवश्यकता अनुसार को आयोजन गर्दछ।. यो आश्चर्यको रूपमा आउँदैन कि व्यापार, उद्यमहरु र अनलाइन ब्रान्डहरु को लागी स्क्रैप गरिएको डाटा को लागि ओभरफ्लेंड मांग छ. यसैले SimpleIndex जस्तै एक उपकरण धेरै जानकारी प्रदान गर्न सक्छ र तपाईंको अपेक्षाहरु संग आउँछ. त्यसकारण, तपाईले eBay र अमेजन-जस्तो उपकरणहरूबाट डाटा निकाल्न वा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरणमा प्रवेश गर्नका लागि हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यो उपकरण प्रयास गर्नुपर्छ र केही दिन भित्र तपाइँको ब्रान्ड पहिचानको आश्वासन पाउनुपर्दछ।.
2. गुणस्तरमा कुनै सम्झौता
त्यहाँ धेरै ठूला डेटा स्क्रैपिंग प्रोग्रामहरू छन्, राम्रो तरिकामा तपाइँका आवश्यकताहरू पूरा गर्दै छन्।. तिनीहरूमध्ये केही सीमित विकल्पहरू संग फ्रीवेयर छन् जबकि अन्य pricey हो र सुरुआतअप अनुरूप छैन. यसको विपरीत, SimpleIndex को सरल र परिष्कृत साइटहरु दुवै को डेटा को एकत्रित गर्न को लागी डिजाइन गरिएको छ. उत्तम भाग यो उपकरणले तपाईंलाई धेरै खर्च गर्दैन. यसको मतलब तपाईं यस डेटाबाट एक स्टार्टअपको रूपमा स्क्रैपिंग फ्यान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो अनलाइन व्यापार बढ्न सक्नुहुन्छ, बिना गुणवत्तामा सम्झौता बिना।.
3. बजार अनुसन्धानका लागि राम्रो
नवाचार र प्रवृत्तिले हामीलाई हाम्रो उद्योगको सामान्य तस्वीर हेर्न अनुमति दिन्छ. SimpleIndex, एक नयाँ अझै सम्म उन्नत डेटा स्क्रैपिंग अनुप्रयोग भएको छ, असाधारण विशेषताहरु को भार छ र तपाईंको बजार अनुसन्धान सजिलो बनाउँछ।. यो असफल व्यवसायहरू र नयाँ कम्पनीहरूको लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो, र विभिन्न प्रवृतिहरूको भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्दछ.
4. अपडेट गरिएको जानकारी
SimpleIndex एक मात्र उपकरण हो जसले अपडेट र उपयोगी डेटाको प्रावधानको प्रतिज्ञा गर्दछ. केहि डेटा स्क्रैपिंग सेवाहरु लाई इच्छित परिणाम प्रदान गर्दैन. तिनीहरू या तो डेटा अपरिहार्य ढाँचामा व्यवस्थित गर्नुहोस् वा सम्झौता गर्न गाह्रो हुन्छन्. तर SimpleIndex एक व्यापक कार्यक्रम हो जसले तपाईको डेटा स्क्रैपिंग आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ र केवल सटीक र प्रामाणिक सूचना प्रदान गर्नेछ.
5. बुद्धिको लागि व्यापार मूल्याङ्कन
तपाईं व्यापारको विश्लेषण र मूल्यांकनको महत्त्वलाई जोड दिन सक्नुहुन्न. यो सबैको लागि अद्यावधिक गरिएको जानकारी सबैको लागि महत्वपूर्ण छ. तर SimpleIndex सँग, तपाईं केवल तपाइँको स्क्रैप गरिएको डाटाको गुणस्तर नदेख्न सक्नुहुनेछ तर समस्या बिना व्यापार मूल्याङ्कनको साथ पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।. तपाईं पनि जाँच्न सक्नुहुनेछ कि तपाइँका प्रतियोगीले आफ्नो खोजशब्द र कसरी बिग्रेको व्यवसायको प्रयोग गर्ने डेटालाई स्थान दिईयो.
यसलाई योग गर्नको लागि, यो तपाइँ माथि छ तपाई कुन डेटा स्क्रैपिंग कार्यक्रम छनौट गर्नुहुन्छ. तर जब यो एक ब्रान्ड स्थापना गर्न र प्रतिस्पर्धी संगठन को बनाए राख्छ, तपाईं या तो SimpleIndex या अन्य समान डेटा स्क्रैप को लागी चुन्नुहोस चाहिए Source .